फ्रान्समा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या घट्दै : RajdhaniDaily.com
Home विदेश फ्रान्समा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या घट्दै
By एजेन्सी ।
पेरिस । फ्रान्समा कोभिड १९ का संक्रमितहरुको संख्या पछिल्ला केही दिनयता आएर घटेको देखिएको छ । अघिल्लो करिब दुई हप्ता अघिसम्म झन् बढेको अवस्थामा रहेका कोभिडका संक्रमितहरु पछिल्लो समयमा आएर भने घटेको पाइएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुले पछिल्लो समयमा कोभिडका संक्रमितहरु घट्दै गएको देखिएको बताएका हुन् ।
पछिल्लो पटक अर्थात् आइतबार फ्रान्समा १५ हजार भन्दा केही बढी संक्रमित देखिएका बताइएको छ ।आइतबार मात्र फ्रान्समा १५ हजार ९४४ जनामा कोभिडको संक्रमण पाइएको हो । तर यहाँका अधिकारीहरुले भने यही जनवरी ३ तारिखपछि यहाँ यो संख्या सबैभन्दा कम भएको बताएका छन् । आइबार देखिएको यो संख्या पछिल्लो हप्ता यताकै सबैभन्दा कम भएको फ्रान्सको पब्लिक हेल्थ एजेन्सीले जनाएको छ ।सो एजेन्सीले आइतबार यस संक्रमणबाट ज्यान जाने व्यक्तिको संख्या १५१ मात्र रहेको पनि जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
गएको शनिबार मात्र यहाँ २० हजारभन्दा बढी नागरिकमा नयाँ संक्रमण देखिएको जनाएको थियो भने आइतबार यस संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको पाइएको फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको थियो । महामारी सुरु भएदेखि यताको संख्या हेर्दा यहाँ २७ लाख ८३ हजार भन्दा बढीमा यो संक्रमण देखिएको बताइएको छ । उक्त एजेन्सीले फ्रान्सको यो संख्या युरोपेली देशहरुकै दोस्रो ठूलो संख्या हो भनेको छ । युरोपेली देशहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै कोभिडका संक्रमितहरुको संख्या बेलायतमा बढी देखिएको छ ।
यहाँ पछिल्लो समयमा कोभिडको नयाँ जातको संक्रमणको पनि प्रकोप बढेको देखिएको अर्काे एक समाचारमा जनाइएको छ । उक्त एजेन्सीले दिएको जानकारीअनुसार फ्रान्समा ५७ हजार ७५० जनाको यस संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । अहिले पनि हरेक दिन यहाँका नागरिक यो संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइरहेका बताइएको छ । शनिबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा यहाँका २४ हजार ५५९ जना विरामी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका देखिएको छ । तीमध्ये पनि यहाँका २ हजार ६२९ जनालाई आइसियुमा राखेर उपचार गराइएको पनि फ्रान्सको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
फ्रान्सका अधिकारीहरुले यहाँ पनि पछिल्ला केही हप्तायता बेलायतमा जस्तै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण शुरु भएको जनाएका थिए । त्यसका कारण यहाँका धेरै जसो सेवा क्षेत्रहरुमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनका कारण यहाँको जनजीवन पनि निकै नै प्रभावित भएको राजधानी पेरिसबाट प्राप्त भएका समाचारमा जनाइएको छ ।
Exclusive युवराज विष्ट - January 24, 2021 0
प्रदेश २ आलोक यादव - January 23, 2021 0
संगीत नाट्य प्रतिष्ठानलाई कलाकारको ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । १२ नाट्यकर्मीले यस्तो बेलामा पनि आफूहरूलाई नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बेवास्ता गरेको भन्दै नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कोभिड–१९...
राजधानी समाचारदाता - March 24, 2020 0
धनकुटा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ६ गुल्म हे.क्वा. छिन्ताङ्ग धनकुटाको सक्रियतामा मास्कको अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय श्रोत साधन उपयोग गरी...
पोखरामा कोरोना संक्रमितको निधन
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 25, 2020 0
पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमितको हिजो निधन भएको छ । अस्पतालबाट बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार स्याङजा सिरुवारी निवासी ५५...
बिचार राजधानी समाचारदाता - March 22, 2020 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आज थप चार जनाको मृत्यु भएको छ । मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा दुई र सुनसरीमा र नवलपरासीमा एक–एक...
भुवनहरिले ल्याए ३५औं कृति लालस
कला राजधानी समचारदाता - November 10, 2020 0
काठमाडौं । अग्रज साहित्यकार भुवनहरि सिग्देलको ३५औं कृति ‘लालस’ उपन्यास प्रकाशित भएको छ । यो पुस्तकलाई शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो । काठमाडौंमा आइतबार...
Breaking News एजेन्सी - January 21, 2021 0
अर्थ राजधानी समाचादाता - January 20, 2021 0